मर्सिडीज 211, 2001 मा पेश, अघिल्लो मोडेल देखि सानो फरक देखिन्छ। तर, यो मौलिक अलग कार थियो। गाडी (थियो शीर्षक सूचकांक "टी") र पालकी - मर्सिडीज 211 शरीर को दुई प्रकार संग प्रस्ताव राखे। पाँच वर्ष पछि, कार को उपस्थिति अलि फरक भएको छ - Bumpers, sills, को आकार परिवर्तन जंगला र पछिल्लो-दृश्य दर्पण।
मर्सिडीज 211 पेट्रोल आन्तरिक दहन मात्रा 1800, 2600, 3.0, 3200, 5.0 मा स्थापित, र 2200, 2.7, 3.0, 3200, 4.0 लिटर को डिजेल इन्जिन मात्रा को 5.5 लिटर। पनि एक पेट्रोल आन्तरिक दहन इन्जिन संग AMG मोडेल द्वारा बेचिएको - E63 र E55।
सबै इन्जिन विश्वसनीय र टिकाउ हुन्छन्, तर केही समस्या त्यहाँ अझै पनि छन्। उदाहरणका लागि, नियन्त्रण एकाइ पीएमएस-इंजेक्शन चिस्यान, संवेदनशील छ अक्सिजन सेन्सर - गरिब इन्धन गर्न। 1800 लिटर गर्न मोटर्स मा। मा अवलोकन अनियमित काम निष्क्रिय। जब 1,50,000 लाभ गर्न एक गतिशील ड्राइभिङ शैली खुम्च्याउने काम रोक्न सक्छ। समय एयर फिल्टर प्रतिस्थापन गर्दैन भने, ब्लोअर तेल प्राप्त हुनेछ र इन्जिन ठूलो स्वरमा सञ्चालन हुनेछ। प्रति हजार किलोमिटर एक लीटर सम्म - V8 र वी6इन्जिन तेल को धेरै उपभोग।
एक डिजेल आन्तरिक दहन इन्जिन संग वाहन मा depressurization magitraley इन्धन इंजेक्टर एक डिजेल गुणस्तर कारण विफलता बारम्बार अवस्थामा छन्।
6-गति मार्गदर्शन प्रसारण, एक पाँच-र सात-गति स्वचालित प्रसारण (7G-इलेक्ट्रनिक): मर्सिडीज 211 मा निम्न प्रसारण सेट। मार्गदर्शन प्रसारण संग युग्मन लगभग 130 000 -149 000 किलोमिटर छ। को स्टीयरिंग विशेष कमीकमजोरी पहिचान गरिएको छ। 2003 देखि, त्यहाँ मर्सिडीज सबै-पाङ्ग्रा ड्राइव को 211 संस्करण थिए।
कार बहु-लिंक stabilizer संग स्वतन्त्र निलम्बन। तपाईं 85 000-90 000 किलोमिटर चलाउन जब अगाडि अनुदैर्ध्य हतियार को प्रतिस्थापन आवश्यक छ। बारेमा 149 000. सबैभन्दा अक्सर पछिल्लो निलम्बन वाहन मा मौन ब्लक तोड्न - सामने शक पछिल्लो, 1,31,000 किलोमिटर लगभग छन्। मोडेल E500 मा, E420 CDI, E63 AMG लागि सबै पाङ्ग्रा सेट हावा निलम्बन। तथापि, तिनीहरूले कहिलेकाहीं काम (अक्सर चिसो मौसममा) रोक्न।
सबै पाङ्ग्रेमा डिस्क ब्रेक, ABS पूर्ण-समय छ। पैड सामान्यतया 20-33 हजार मी पछिल्लो मा प्रतिस्थापन आवश्यक - 41-49 हजार किलोमिटर पछि .. .. अगाडि ब्रेक डिस्क हरेक 50 000-60 000 मी प्रतिस्थापित र पछिल्लो हुनुपर्छ - 120 000-130 000 kilomektrov। दुर्लभ अवस्थामा, यो ABS सिस्टम इन्कार गर्न सक्छ। सामान्य, बिजुली उपकरण मा सुरक्षित। तर कहिले काँही यस्तो कार नेविगेशन प्रणाली रूपमा केही घटक, मोबाइल फोन निर्माण मा-, वा बिजुली ड्राइव ढोका अस्वीकार गरियो। त्यहाँ ब्याट्री को छुट्टी को अवस्थामा थिए।
मा मिसिन मर्सिडीज 211 उत्पादन को पहिलो वर्ष थिए अवस्थामा नियन्त्रण बिजुली ब्लक, ढोका ह्यान्डलहरू, केही सेन्सर (तेल स्तर, यात्रु उपस्थिति), एक इलेक्ट्रोनिक वाल्व हीटर असक्षम। कहिले काँही काम गर्न ceases ब्लक वेंटिलेशन र ताप, साथै चालक सीट खुम्च्याउने।
मर्सिडीज 211: कार मालिक को समीक्षा
पेशेवरों: गतिशीलता, राम्रो प्रवेग, जर्मन गुणस्तर, बलियो शरीर, राम्रो ह्यान्डलिङ, उत्कृष्ट maneuverability, चिल्लो चलिरहेको, बाटोमा स्थिरता, किरा, शैली, उपस्थिति, ब्रान्ड को एक विस्तृत गर्न को समसामयिक खण्डमा संग कष्ट-मुक्त सञ्चालन।
विपक्ष: महंगा मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स र मर्मत, सडक मर्सिडीज 211 ट्युनिङ।
डिजाइन र विनिर्देशों "किया Picanto"
"टोयोटा" hereon -gibrid
समीक्षा: "Citroen C3 पिकासो।" "Citroën C3 पिकासो": प्राविधिक विनिर्देशों, फोटो
"होन्डा-सोलारिस": विशेषताहरु, फोटो र समीक्षा
लोकप्रिय एनालग "Tebantina"। "Tebantin": निर्देश पुस्तिका, समीक्षा र analogues
अटारी खेलौना इतिहास, फोटो। अटारी खेलौना "बिरालो"
होटल कोको Resort Morjim2* (भारत, गोवा): समीक्षा, वर्णन, सेवा र सुविधाहरू
केले क्रसप्रेजलाई निको पार्छ? स्टोन जसको गुणहरू अमूल्य छन्
पोर्ट कलैस को (फ्रान्स): शहर को रोचक ठाउँहरू, एक लोकप्रिय पर्यटक गन्तव्य
विकास, क्रिस इभान्सको वजन - अभिनेता को लोकप्रियता दर्जा मा एक निर्णायक सूचक होइन
ठूलो खाना प्रमीहरूको, वा कसरी ओवन मा मासु पकाउन लागि सुझावहरू
संक्षिप्त जीवनी Rinat Karimov
ठूलो उत्तरी युद्ध, नार्भा युद्ध: वर्णन, कारण, इतिहास र नतिजा